Mpanamboatra sy mpamatsy horonan-taratasy - China Track Roller Factory
T fitaovam-piadiana TELESCOPIKA
Ambongadiny BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Roller Bulldozer Bottom Roller Assembly
Ilay fantsom-pifamoivoizana antsoina koa hoe roller eo ambany na roller ambany dia ampahany lehibe ao anaty kitrotro ho an'ny mpitsangatsangana na mpanao bulldozer. Izy ireo dia mifandray akaiky amin'ny tongotra an-tany, noho izany ny kalitaon'ny roller roller dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fanatanterahana ny fitaovana.
Ilay roulex track izay nantsoina ihany koa hoe roller any ambany na roller ambany dia ampahany lehibe ao anaty fiara ho an'ny crawlerexcavators na bulldozers. Izy ireo dia mifandray akaiky amin'ny tongotra an-tany, noho izany ny kalitaon'ny trackroller dia misy akony lehibe amin'ny fahombiazan'ny fitaovana.
(1) Ny akorandriaka tsirairay dia entina am-pitandremana hafanana mba hiantohana ny fiainana lava sy ny fanoherana ny fihenjanana;
(2) Ny roller tsirairay dia masinina mazava tsara hampiantranoana bimetal bushings misy fiantraikany avo lenta.
(3) Azo antoka sy maharitra ny androm-piainana;
(4) Hery matanjaka sy fanoherana mahery vaika.
Azo antoka sy maharitra ny androm-piainana, hery lehibe ary fanoherana ambony ny akanjo.
Ilay track roller dia antsoina koa hoe roller eo ambany na roller ambany, Ny akorany tsirairay dia hafanaina tsara mba hahazoana antoka fa maharitra ny ainy sy ny fanoherana ny adin-tsaina
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Roller Bottom Roller EX15 / EX22 / EX30 / EX35 / EX40 / EX60
Bonovo dia afaka manome anao chassis isan-karazany mety amin'ny ankamaroan'ny marika ny excavator sy milina Caterpillar hafa. Ireo mpiasa manana traikefa mihoatra ny folo taona, samy miezaka ho tonga lafatra
Teknolojia, Bonovo dia manohy manome ampahany chassis matanjaka miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny tsara indrindra manerantany.
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Roller Bottom Roller D2 D3C D4 D4d D5B
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Roller Bottom Roller KX20 KX030 KX035 KX101
Azo antoka sy maharitra ny androm-piainana.
Hery matanjaka sy fanoherana ambony akanjo.
Matihanina, avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana, mitaky.
BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Roller Bottom Roller D8R D8K D9L D10T D11N
Ilay fantsom-pifamoivoizana antsoina koa hoe roller eo ambany na roller ambany dia ampahany lehibe ao anaty kitrotro ho an'ny mpitsangatsangana na mpanao bulldozer.
Ny roller tsirairay dia voahosotra masinina mba hipetrahana bimetal bushings mitaingina fiatraikany ambony ambany.
Ny akorandriaka tsirairay dia entina am-pitandremana hafanana mba hiantohana ny fiainana lava sy ny fanoherana ny fihenjanana;